juin 2018 - Page 3 sur 102 -
Sambo rendrika tany Mananara Avaratra : Mpandeha iray tsy hita popoka
Olona iray isan’ireo tomponandraikitra miisa fito nandeha tamin’ilay sambo MS Ambodiampana niharan-doza teo vinany Fahambahy, kaominina sy distrikan’I Mananara Avaratra ny 23 jona lasa teo no mbola tsy hita popoka hatramin’izao. Tsy naninona kosa ireo …Tohiny
Ady amin’ny tsy fanjariantsakafo : Nandamoka ny asan’ny Ong
Ny taona 2013 no nivoaka fa ny 47,3 isan-jato ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara dia tratran’ny tsy fanjariantsakafo mitarazoka. Nandamoka ny asan’ny Ong satria 4 taona aty aoriana mbola tsy nihetsika io …Tohiny
Mgr Tsarahazana Désiré : Tafapetraka ny marika maha kardinaly
Tafapetraka omaly tamin’ny fomba ofisialy any Vatican ny marika maha kardinaly ny Mgr Tsarahazana Désiré miaraka amin’ ireo 14 mirahalahy izay notendren’ny Papa François farany teo. Nisy ny sorona masina lehibe notanterahina tao amin’ny basilikan’i …Tohiny
Mijanona ho isan’ireo mpiara-miombon’antoka lehibe indrindra ho an’i Madagasikara i Etazonia. Ho an’ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena hatao eto Madagasikara, izay efa fantatra fa tanterahina amin’ny faha-7 novambra 2018, dia vonona hanohana antsika izy ireo. …Tohiny
Karaman’ny mpiasam-panjakana : Nasondrotry ny Filoham-pirenena 8 %